माओवादी विद्यार्थीबीच किन भयो कुटाकुट? सिंहको नेतृत्व अवैधानिक भएको दाबी! « Dainik Online
माओवादी विद्यार्थीबीच किन भयो कुटाकुट? सिंहको नेतृत्व अवैधानिक भएको दाबी!
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७९, सोमबार ५ : ०२
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले उपाध्यक्ष पवन कार्कीसहित ९ जनामाथि निलम्बनको कारबाही गरेपछि हंगामा मच्चिएको छ। संगठन विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै आइतबार बसेको क्रान्तिकारीको बैठकले उनीहरूलाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसंगै संगठन दुई धारमा विभाजित छ।
अध्यक्ष पन्चा सिंहसहितको समूहले कार्कीमाथिको कारबाही स्वाभाविक मानेका छन् भने अर्को पक्षले अब संगठनमा राँको दन्किने चेतावनी दिएको छन्। नेतृत्वले संगठनको विधि र विधान विपरीत जिम्मेवारी बाँडफाट लगायतका निर्णयहरु एकलौटी गरेको आरोप लगाउदै कार्की समूह असन्तुष्ट छ। उनीहरुले वर्तमान पंचा सिंहको नेतृत्व नै अवैधानिक रहेको भन्दै यस्तो कमिटिले गर्ने कारबाही नमान्ने बताएका छन्।
आखिर के भएको थियो वैठकमा?
तीनकुनेस्थित एक ब्याङक्वेटमा आइतबार अखिल क्रान्तिकारीको बैठक बसिरहेको थियो। त्यही बेला उपाध्यक्ष कार्कीसहितको टोलीले संगठनका फ्याक्सन इन्चार्ज हितमान शाक्यको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरे। यत्तिमा मात्र सिमिति थिएन नाराबाजी, शाक्यमाथि कालोमोसो दल्न कार्कीको समुहले खोजेको थियो।
मारामारको स्थिति भएपछि ३/४ वटा बख्तरबन्द गाडी, करिब ३/४ सयको संख्यामा रहेका प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यसपछि कार्कीसहित कार्कीसहित केन्द्रीय सदस्यहरु बसन्ता भण्डारी, पदम नेपाली, रमेश खड्का, बालकुमार केसी, उपदेश यादव, सन्जिव चौधरी, रविन बस्नेत र समिर बुढाथोकी निलम्बनमा परेका छन्।
के भन्छ निलम्बित कार्की समुह?
विधि र विधान मिचेर बनेको अवैधानिक कमिटिले आफूहरुमाथि गरेको कारबाही हाँस्यास्पद भएको कार्की समुहको भनाई छ। निलम्बित कार्की भन्छन् ‘यो अवैधानिक कमिटिको कारबाही मान्य छैन, हामीले मान्दैनौ। यो कमिटि नै भंग गरेर अब राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् चुनावबाट नयाँ कमिटि नबनाई समस्या समाधान हुदैन।’
कहाँबाट सुरु भयो विवाद?
२२ औं राष्टिय सम्मेलन अघि संगठनको विधान सम्मेलन भएको थियो। जसले २५ जनाको पदाधिकारी, १९९ जनाको केन्द्रिय कमिटि र ३ वटा आयोग बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी विधानले कुनै एक पदमा बसेको ब्यक्ति अर्को पदमा दोहोरिन नपाउने अर्थात् एक ब्यक्ति एक पदको नीति अख्तियार गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आइपुग्दा विधानको अवमुल्यन भएको कार्की बताउँछन्। विधान सम्मेलन अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्ने र नेतृत्व चयनमा पनि सोही विधि अपनाउनु पर्ने भन्दै उतिखेर पनि आफ्नै नेतृत्वमा नाराजुलुस भएको कार्कीले स्मरण गरे।
राष्ट्रिय सम्मेलन विवादित बनेपछि त्यतिबेला सिंहलाई अध्यक्ष तोकेर १ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटि बनाइएको थियो त्यसको ३ महिनापछि अध्यक्ष सिंहले कमिटि विस्तार गर्ने भन्दै फेसबुकमार्फत् केन्द्रिय कमिटि घोषणा गरिन्, निलम्बबित कार्की भन्छन् ‘त्यो बेला पहुच र पावरवालाको केन्द्रिय कमिट बन्यो। सबैले सपथ पनि खाए। त्यो विधान र मापदण्ड विपरित फेसबुके केन्द्रीय कमिटि थियो।’ यस्तो कमिटिले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै डटेर विरोध गरिरहेको उनले बताए ।
उनी भन्छन् ‘त्यतिखेर पनि विवादलाई थामथुम गर्ने कार्य भयो । हामीलाई सामान्य रुपमा बुझियो । मिलाउने काम भएन । फेसबुक कमिटि घोषणापछि ७ मिहनापछि वैशाख ५ गते प्रशिक्षणत्मक भर्चुअल बैठक बस्यो । जसमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो।’ सो वैठकमा विवाद नगर्ने र स्थानीय तहको चुनावपछि सबै समस्या समाधान गर्ने कुरा प्रचण्डले राखेको कार्कीले बताए। तर पार्टी नेतृत्वलाई पनि अटेर गरी अध्यक्ष सिंह र उपाध्यक्ष हितमानले आफूअनुकुल पदाधिकारी घोषणा गरेको कार्कीको अरोप छ।
सो बैठकमा आफूअनुकुलका फेसबुक मिटिङमा घोषणा नभएका ५ जनालाई पदाधिकारीमा थपेको, ३ वटा आयोगको सट्टा विधानमै नभएको ५ वटा आयोग बनाइएको, कम्तिमा पनि १२ र १३ सय प्रतिनिधि रहनुपर्नेमा २० प्रतिशत पनि नपुग्ने गरी डेढ सय देखि २ सय जनाको सहभागितामा कमिटि घोषणा गरिएको कार्की पक्षको आरोप छ।
यसलाई पार्टीले पनि अमान्य ठहर गरेको उनले बताए । स्थानीय चुनाव सकिएपछि समस्या समाधान गर्ने पार्टी अध्यक्षको आदेश, विशेष भेला र सम्मेलनमार्फत् पदाधिकारी थप्नुपर्ने आफूहरुको माग विपरित सिंह र शाक्यले लगातार अवैधानिक गतिविधि गरेको कार्कीले बताए ।
‘संगठनमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीको स्थायी कमिटि वैठक नै बसेर प्रचण्डलाई मिलाउन भनेको थियो। त्यसपछि सिंह र मलाई बोलाएर नमिलेको मिलाउने, विधिविपरित आएका पदाधिकारी हटाउने आदेश प्रचण्डले दिनुभयो’, उनले भने ‘त्यसपछि पनि सिंह र शाक्यले पेल्ने नीतिमा जानुभयो र केन्द्रिय कमिटि वैठक बसाल्नु भयो। हाम्रो विरोध जारी थियो । लफडा भयो। दुर्घटनाको स्थिति बन्यो।’
अब आफूहरुको माग फ्याक्सन इन्चार्ज र अध्यक्ष सिंहलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट टिका लगाएर होइन कि चुनावमार्फत् नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेका कार्कीले बताए। यस विषयमा सोमबार पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर जानकारी गराएको पनि उनले सुनाए। अध्यक्ष सिंहलाई चुनावबाट निर्वाचित हुन चुनौती दिँदै आफूहरु भीड्न तयार रहेको समेत उनले बताए।
अब विधिमार्फत् आधिकारिक केन्द्रिय कमिटीचयन नहुँदासम्म यो विवाद जारी रहने उनले बताएका छन्। यता सिंह समूहले भने कार्की समुह मिल्न नखोजेको, अनावश्यक बखेडा झिकेको, बैठकमा अराजक बन्न खोजेको भन्दै बाध्य भएर कारबाही गर्नु परेको जनाएको छ।